Akụkọ - Ihe Atọ I Nweghị Ike Ileghara Anya Mgbe Re Na-ezo Aka Ime Ọkpụkpụ
Ihe Atọ You Pụrụ nothapụ Ileghara Anya Mgbe fer Na-ezo Aka Ime Ọkpụkpụ
Na 20 + afọ 'ahụmahụ na plastic ebu Ndinam na plastic akụkụ mmepụta, YF akpụzi nwere ahụmahụ injinịa imewe na toolmaking otu. Anyị na-agbasi mbọ ike izute ma gafere ihe mgbaru ọsọ na atụmanya ndị ahịa anyị. N'oge ịkpụzi akpụzi, ihe atọ dị mkpa ka anyị attentionaa ntị
1. You nwere ike ọ bụghị naanị ilekwasị anya na ngwaahịa imewe ma ileghara plastic injection ebu n'ichepụta.
Offọdụ ndị ahịa anyị ka emikpuru n'ime mmepe ngwaahịa ma ha ekwughi okwu na onye mepụtara ya n'oge. Mgbe ngwaahịa imewe na-iburu kpebisiri ike, ị kwesịrị ị na-ekwurịta okwu na gị ebu emeputa na ike inyere ịzọpụta oge gị na-eri. Onye na-akpụzi ihe nwere ahụmịhe bara ụba nwere ike inye gị ndụmọdụ ọkachamara banyere ụdị ngwaahịa gị. Iji mepụta akwa plastik dị elu, ọkọnọ na-achọ ka akụkụ abụọ ahụ nwee ezigbo nkwukọrịta nke nwere ike belata ụgwọ ma belata oge.
YF ebu na-enye DFM n'efu iji nyere aka nyocha zuru ezu nke ngwaahịa gị na ntanetị, nkwụsị na nkuku wdg.
2. Kwesighi ilekwasị anya na ọnụahịa kamakwa ịtụle ogo, oge okirikiri na ọrụ.
(1) Enwere ọtụtụ ụdị ebu, ma họrọkwa teknụzụ kwesịrị ekwesị.
(2) Ebu nwere oke nkenke choro kwesiri ime ya site na igwe CNC zuru oke, ma nwee ihe achọrọ siri ike na nchara ígwè na imepụta teknụzụ.
(3) moldlọ ahịa ebu kwesịrị inwe nnukwu ọsọ CNC, mirror EDM, igwe na-egbu waya ngwa ngwa, Ngwa ngwa CMM zuru oke, wdg.
3. Zere mmekorita otutu uzo ma gbalịa ịhọrọ nhazi otu uzo.
(1) Site na ikike ebu, o nwere ike ọ gaghị ekwe omume imepụta ezigbo ngwaahịa mgbe ọnụọgụ buru ibu, n'ihi na onye na-achịkwa igwe ntanye plastik dị mkpa, igwe onyonyo nke ndepụta oke na-emetụta ogo ngwaahịa gị.
(2) Inwe ezigbo ebu ma chọkwa ime ụlọ plastik dị mma, ọ kachasị mma ịrụ ọrụ site na nkwado otu nzọụkwụ, ma gbalịa izere imekọ ihe ọnụ.
Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Ndị na-emepụta ebu ebu, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Plastic Fanye Nkedo, Akpụzi Factory, Omenala akpụzi,